uketshezi Magnetic - isimangaliso ezenziwe umuntu eliyingqayizivele, ukudalwa entuthukweni yezobuchwepheshe nezinto umcabango ngokwesayensi kwekhulu lamashumi amabili. Ngokungafani iningi ezisunguliwe genius womuntu, into ewuketshezi ezinjalo, nge izakhiwo oqinile magnetic, akanayo analogue ngokwesimo. Nge ukuthuthukiswa ngokushesha ubuchwepheshe, isici isikhathi sethu, izinto nge ezifana izakhiwo ngokungavamile izinhlelo zokusebenza ezingaphezulu.
uketshezi Magnetic kuyinto ukumiswa esihle, ngamanye amazwi, isixazululo colloidal ka impahla ferromagnetic e esiku naphakathi ketshezi okungase ikhonze amanzi njengoba abavamile hydrocarbon, ne-silicon noma izinto organofluorine. Kwakukhona okufana izidakamizwa engavamile isikhathi eside. Emuva maphakathi nawo-sixties base kwemiqondo e-United States ne-Soviet Union cishe kanyekanye.
Nakuba uketshezi kazibuthe esetshenziswa ezinhlelweni ezehlukene isikhala, lapho imibuso emibili emikhulu olwenziwa uye wakwenza ngokuzimisela. Ububanzi ebanzi we wezesayensi lezi izinto engavamile babé esikhona sakamuva. Manje uketshezi kazibuthe ibilokhu wafunda kakhulu emazweni amaningi athuthukile nge onekusasa yesayensi: Japan, France, Germany, iGreat Britain nabanye.
Lezi izidakamizwa isimanga esiyingqayizivele inhlanganisela yayo evelele wamandla okusezingeni eliphezulu isivuno nge izakhiwo ezehlukile kazibuthe, ku kuzo amashumi ezinkulungwane oda ezidlula ephakeme kunabo bonke uketshezi ezaziwayo. Imfihlo kuyinto magnetization lenhle ngekwenta izinto ferromagnetic ahlakazekile ukuba usayizi esingeqile nanometer eziyishumi, futhi bethula isigijimi okwalandela ibe medium abavamile ketshezi.
Ngakho, into nge fluidity kakhulu ekuqaleni ayegcwele inombolo zicatshangwe ezinamandla miniature uzibuthe unomphela ukuma eyindilinga. nanoparticle ngamunye camera zokuzivikela-repellant ifilimu ukuthi kubavikela ukuhlala ndawonye. I motion ezishisayo odonsa encane ihambisa kulo lonke ivolumu yento engesimumathini, kanjalo ugwema ukuba kuxazululwe le izinhlayiya kuze kufike phansi. Ngenxa yalokho, uketshezi kazibuthe uyakwazi ukugcina siqu izinga layo eliyingqayizivele ukusebenza iminyaka eminingi.
uzibuthe ngasinye ezincane ngezikhathi ukhiphela ketshezi bedle ukushisa. I yangaphandle kazibuthe ngendlela ethile ngamakhasimende zikhathi magnetic le microparticles, elibangela izinguquko izakhiwo optical, rheological futhi kazibuthe yesixazululo colloidal. Ngenxa yalokho, ezingeni lelisetulu nozwela slurry kuya yangaphandle kazibuthe umthombo ensimini inikeza ikhono ukulungisa ukuziphatha kwabo. Ngakho, controllability futhi ezidinga uketshezi kazibuthe ngokwayo, ukusetshenziswa okuyinto kuba nokwenzeka eziningi ezahlukahlukene kwezicelo.
ukumiswa Ferromagnetic kakade liyasetshenziswa womshini angaphandle kanzima, lapho zisetshenziswa kushaft ujikelezisa ukuvimbela ingress ndaba bezinye izizwe abavela emaqenjini ngaphandle. ukumiswa okunjalo nazo asetshenziswe ekukhiqizeni ephezulu imvamisa izikhulumi aerospace kanye ukuzivikela umkhakha, yokukhanya namandla imithi, electronics kanye umkhakha ithuluzi wokwenza.
Kungani abantu beqola? Izizathu zokuphatha